Izindaba - I-Lida Plastic Quality Rigid Product Ukufinyelela Izinga Elithuthukisiwe Lamazwe Omhlaba Noma Langaphandle
Iphaneli yeshidi le-Lida Plastic Rigid PVC selihloliwe futhi laqinisekiswa yiminyango efanelekile, kuze kufike ezinhlinzweni zesiFundazwe saseHebei ukwamukela izinyathelo zokuphathwa kwezinga elijwayelekile zamazwe omhlaba, zanqoba ukulawulwa nokuphathwa kwemakethe yesiFundazwe saseHebei okukhishwe "ukwamukelwa kwesitifiketi sokugunyazwa okujwayelekile kwamazwe omhlaba" . Isitifiketi sikhombisa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo yethu ifinyelele ezingeni lamazwe omhlaba noma ezingeni eliphakeme langaphandle.
Iphaneli yethu ye-PVC Ishidi yenziwe nge-thermoplastic eguquguqukayo ngokweqile. Inokumelana okuhle kwamakhemikhali nokucindezela, ukuvimba umsindo, ukufudumeza ukushisa nokufakwa komsindo nokulondolozwa kokushisa nokuvikela ukugqwala. Iphaneli yeshidi le-PVC inikeza ubunzima obuhle kakhulu nokumelana nomthelela omuhle. Ucutshungulwa ngefomula emelana nesimo sezulu, lo mkhiqizo umswakama futhi umelana nesikhunta ngoba awumunci amanzi. Amashidi e-PVC ahlala isikhathi eside futhi abamba umbala wawo unyaka nonyaka. Futhi, isisindo sayo esincane senza kube lula ukugcinwa nokuhamba.
I-Polyvinyl chloride (i-PVC) ingelinye lama-thermoplastics asetshenziswa kakhulu namuhla. Isetshenziswa kakhulu kuzo zonke izimboni kusuka ekupakisheni ukudla, kuya ekwakhiweni kwamakhaya. Isilinganiso sayo esikahle sokuqina nesisindo nokumelana nelangabi eliphakeme, kuhambisana nezindleko zaso eziphansi, kuyenza ibe yinto ekhethwayo kuzinhlelo zokusebenza ezifuna kakhulu.
Izinga lokushisa eliphezulu le-PVC ngu-140 ° F (60 ° C). Izici ezibonakalayo ze-PVC zingashintshwa kalula ngokufakwa kwama-plasticizers, ama-modifiers wokushintsha kanye nezinye izithako zokuthuthukisa nokwengeza izakhiwo ezithile. I-PVC yethu eqinile yinto enokumelana nokugqwala okuphezulu enezimpawu zomthelela ojwayelekile futhi isetshenziswa lapho ukuhlaselwa ngamakhemikhali kuyinkinga enkulu.